LinkedIn Waxay Bilaabeysaa Cusbooneysiin Isboorti ah | Martech Zone
Talaado, Agoosto 20, 2013 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn ayaa jirtay tijaabinta cusbooneysiinta la kafaala qaaday la leh shirkadaha sida Hubspot, Adobe, Lenovo, Xerox iyo American Express… hada qof walba ayey ufurayaan. Tani waxay u noqon doontaa hab wax ku ool ah shirkadaha B2B si ay u aqoonsadaan oo u bartilmaameedsadaan himilooyinka dadaalkooda suuq-geynta waxyaabaha ku jira LinkedIn.
Faa'iidooyinka Cusbooneysiinta Iskuxirka LinkedIn
Kor u qaad wacyiga iyo aragtida qaabka - xalka suuq geynta si deg deg ah kor loogu qaado wacyiga iyo qaabeynta aragtida astaantaada, alaabadaada, iyo adeegyada.
Hogaanka tayada wadista - Abuur hoggaan tayo leh adoo wadaagaya fikradaha ay xirfadlayaashu raadinayaan. U fiirso waxyaabahaas ku faafay wadaagista asxaabta oo si dabiici ah ugu dhacda LinkedIn.
La dhis xiriirka - Ku faafi waxyaabaha aad ka kooban tahay Cusbooneysiinno Isboonsar leh si aad u abuurto qiime una dhisto kalsooni kicisa wadahadallada socda iyo xiriirada macaamiisha qoto dheer
Cusbooneysiinta Isboortiga ee 'LinkedIn' waxay diiradda saareysaa dib ugu noqoshada boggaaga shirkadda LinkedIn sidaa darteed hubi inaad yeelato sameysashada Bogga Shirkadda hadaadan horey uhelin.
Tags: dhiirrigelinta waxyaabahaLinkedIncusbooneysiinta ku xiran isgaarsiintaxayeysiinta la bixiyaycusboonaysiinta cusboonaysiinta
Tumult Hype 2 ee OSX: Abuur oo Nasiib HTML5